October 2017 | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
10/31/2017 06:22:00 PM समाचार
10/31/2017 05:32:00 PM स्वास्थ्य
10/31/2017 05:20:00 PM खेलकुद
किर्गिस्तानको बिस्केकस्थित डोलेन ओमुरजाकोक रंगशालामा नेपालले खेल सुरु भएको २१औं मिनेटमै गोल खाएको थियो ।
नेपाली रक्षापंक्तिको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै घरेलु टोलीका स्ट्राइकर बोरुबाइभ गुल्झिगितले गोल गरे ।
त्यसयता नेपालले गोल गर्न सकेन । दोस्रो हाफमा केहि सुधारिएको प्रदर्शन गरे पनि नेपालले खेलको अन्तिम मिनेटमा दोस्रो गोल खायो । नेपाली गोलरक्षक अर्पण कार्कीको गल्तिको फाइला उठाउँदै किर्गिस्तानका शुकोरोभ अलिमार्दोनले निणर्ायक गोल गरे ।
छनोट प्रतियोगिताको समूह ए मा नेपालसहित किर्गिस्तान, युएई, बहराईन र ओमान छन् । नेपालले समूहको आफ्नो दोस्रो खेल बिहीबार बहराइनसँग खेल्नेछ ।- अनलाइनखबर
10/31/2017 05:14:00 PM समाचार
10/31/2017 05:13:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
10/31/2017 05:05:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
10/31/2017 05:03:00 PM समाचार
10/31/2017 05:02:00 PM समाचार
काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । कात्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधनी एकादशीका दिन आज बिहानैदेखि देशभरका नारायण मन्दिरमा भक्तजनको भीड लागेको छ ।
आषाढ शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयनी एकादशीका दिन क्षीरसागरमा शयन गर्नुभएका भगवान् विष्णु आजै जागा हुनुहुने भएकाले विशेष पूजा गरिन्छ ।
हरिशयनी एकादशीकै दिनदेखि घर–घरको तुलसी मठमा रोपिएको तुलसीलाई आज भगवान् विष्णुसँग विवाह गरिने प्रचलनसमेत रहेको छ ।
असारदेखि कात्तिकसम्म तुलसीको विशेष पूजा गरिने भएकाले यो समयलाई चतुर्मास पनि भनिन्छ ।
यस समयमा चतुर्मास महात्म्यसमेत सुन्ने गरिन्छ । आज उपत्यकाका चार नारायणमा दर्शन गरे मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ ।
यी चार नारायणको दर्शन गर्न नसक्नेले उपत्यकाको उत्तरी भागमा रहेको बूढानीलकण्ठ नारायणस्थानमा पूजा एवं दर्शन गरे चार वटै नारायणको दर्शन गरे बराबरको फल पाइने विश्वास छ ।
बूढानीलकण्ठमा आजदेखि कात्तिक शुक्लपूर्णिमासम्म लाग्ने विशेष मेला शुरु भएको छ ।
समितिअन्तर्गत आठ उपसमिति बनाइएको अध्यक्ष जयराम थापाले जानकारी दिनुभयो ।
बूढानीलकण्ठमा आज विहान १ बजेदेखि नै पूजा एवं दर्शनका लागि भक्तजनको भीड लागेको छ ।
यस वर्ष सात लाख भक्तजनले दर्शन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको समितिले जनाएको छ ।- (रासस)
10/30/2017 04:13:00 PM स्वास्थ्य
चीनलाई यसरी घेर्दैछ अमेरिका
10/30/2017 03:49:00 PM विश्व
नयाँदिल्ली : बढ्दो चीनको प्रभाव कम गर्न अमेरिकाले घेराबन्दी गर्ने योजना बनाउन शुरु गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिशाली रूपमा दोस्रो कार्यकालका लागि नेता बनेपछि अमेरिकाले यस्तो अभियान शुरु गरेको हो ।
चीनले नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान र अफ्रिकालाई आर्थिक सहयोग गरेर आफ्नो प्रभाव वृद्धि गरेको छ । छोटै समयमा विश्व राजनीतिमा चीनले वर्चस्व कायम गरेको छ । यो अवस्थामा अमेरिकाले जापान, अस्ट्रेलिया र भारतलाई साथ लिएर वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्ने नीतिमा पुगेको छ । चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्ने नीतिअन्तर्गत पहिलो चरणमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका वरिष्ठ अधिकारीहरूले वासिङटनका साथ टोक्यो, नयाँदिल्ली र क्यानबेरालाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छन् । यसलाई कूटनीतिक गठबन्धनकै रूपमा लान अमेरिका तयार भएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्रीको एसिया भ्रमणलाई यसैको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । अमेरिकी कार्यकारी सहायक विदेशमन्त्री अलाइस वेल्सले पत्रकारसँग भनिन्, ‘जुन देशले अमेरिकासँग समान मूल्य मान्यता राख्छन् । उनीहरूलाई उनीहरूकै ढाँचामा आर्थिक विकास गर्न विकल्प प्रदान गर्ने अवसर हुनेछ । सुनिश्चित रूपले यो पूरा गर्न सहयोग दिइनेछ ।’
आगामी महिना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प बेइजिङ र टोक्योको भ्रमण गर्दै छन् । यस्तो समयपूर्व अमेरिकाले यस्तो योजना अघि ल्याएको हो । यसमा असुरक्षित ऋण र सशर्त ऋण नदिने स्पष्ट पारिएको छ । चीनले दिने ऋण असुरक्षित र सशर्त हुने भएकाले अमेरिकाले बेग्लै खालको सहयोग अपनाउने नीति लिएको हो । नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)अन्तर्गत करिब ४४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको प्रोजेक्टको काम हुनेछ । यसका लागि करिब ८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ नेपाललाई दिइनेछ र बाँकी रकम एमसीसीले दिनेछ । वेल्सले यो प्रोजेक्टअन्तर्गत भारतमा सडकका साथै ऊर्जाका क्षेत्रमा सहयोग गरिने बताइन् । नेपाललाई पनि आगामी सात वर्षमा ऊर्जा निर्यातक बन्ने अनुमति दिइने र भारत—नेपालबीच कनेक्टिभिटी निर्माण गरिनेछ ।
अमेरिका, भारत र जापानबीच पहिलेदेखि नै उत्पादक त्रिपक्षीय साझेदारी भएको चर्चा गर्दै बेल्सले अस्ट्रेलिया पनि स्वभाविक साझेदार हुने जानकारी दिइन् । अमेरिकाले आगामी दिनमा यी चार देशबीच बैठक आयोजना गर्न लागेको वेल्सले खुलासा गरिन् । वेल्सले भनिन्, ‘समान मूल्य मान्यता राख्ने देशहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याइने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग गरिनेछ ।’
चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)अन्तर्गत ठूलो रणनीतिक चातुर्य देखाएपछि अमेरिकाले यस्तो योजना बनाएको दाबी गरिएको छ । पहिला सिल्क रोड नाम लिइएको यो चीनका लागि आर्थिक एवं रणनीतिक महत्वको मानिन्छ । यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक भूपकमा खेल्ने चीनको विश्वास छ । ओबीओआरले मार्गका लागि चीनले ४० मिलियन अमेरिकी डलर खर्चिसकेको छ ।
यसै योजनाअन्तर्गत चीनले बंगलादेश र श्रीलंकामा बन्दरगाहमा लगानी गरेको छ । यसले बे अफ बंगालमा चीनको सीधै सम्बन्ध हुनेछ भने अर्कोतर्फ चीन-पाकिस्तान करिडोरले पश्चिमी चीनलाई ग्वादरसँग जोड्नेछ । यसैगरी स्थलमार्ग अन्तर्गत चीन युरोपसँग पनि जोडिएको छ । स्थलमार्गमार्फत चीन खाडी मुलुकसँग पनि जोडिन पुगेको छ ।
यसबाट चीनलाई दक्षिण-पूर्वी एसिया र अफ्रिकासम्म व्यापार गर्न सहज हुनेछ । यसलाई चीनभन्दा बाहिरका शक्तिले एकतर्फी लाभवाला अर्थशास्त्र भएको आरोप लगाइरहेका छन् । भारतले ओआरओबीको शुरुवातदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । भारतले यसबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्दै आएको छ । आफ्नो देशका पूर्वी र पश्चिमी दुवै भागमा चिनियाँ प्रभाव बढ्ने त्रास उसमा छ ।
यसैगरी नेपाल पनि ओबीओआरमा जोडिएपछि भारत चिन्तित देखिएको छ । भुटानबाहेक सबै दक्षिण एसियाली मुलुक चिनियाँ प्रोजेक्टसँग जोडिएपछि भारतले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव कम भएको उसको बुझाइ छ । उसको परम्परागत मित्र नेपालमा पनि चिनियाँ उपस्थिति उसलाई मन परेको छैन । ओबीओआरको विरोधमा हाल उसलाई अमेरिकी साथ पनि मिलेको छ ।
कोहलीले यसरी तोडे तेन्दुलकरको कीर्तिमान
10/30/2017 03:45:00 PM खेलकुद
न्युजिल्याण्डबिरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवशीयमा शतक प्रहार गर्दै भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान बिराट कोहलीले टिमलाई २-१ ले शृङखलामा जित दिलाए ।
करिअरको ३२औं शतकले भारतीय टिमले जितमात्रै हासिल गरेन कोहलीले अर्को कीर्तिमानसमेत बनाए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवशीय ब्याट्सम्यानको रुपमा करिअरकै सबैभन्दा धेरै तथा भारतका लागि नयाँ कीर्तिमानको रुपमा ८८९ रेटिङ प्वाइन्ट हासिल गरे, जुन भारतीय महान खेलाडी सचिन तेन्दुलकरको भन्दा २ अंकले धेरै हो ।
उनले १० दिन अघिसम्म ८७२ अंकसहित शीर्ष स्थानमा रहेका दक्षिण अफि्रकी ब्याट्सम्यान एबीडी भिल्लियर्सलाई पछि पारे । त्यस्तै त्यस्तै ८६५ अंकसहित अष्ट्रेलियाका डेभिड वार्नर तेस्रो स्थानमा रहे ।
नयाँ र्‍याङकिङ अपडेट भारत र न्यूजिल्याण्डबीटको शृङखला, दक्षिण अफि्रका र बंगलादेशको अन्तिम खेल तथा पाकिस्तान र श्रीलंकाको अन्तिमका दुई खेलपछि आएको हो ।
नयाँ र्‍याङकिङमा भारतका पूर्व कप्तान महेन्द्रसिंह धोनी ११औं स्थानमा छन् । त्यस्तै न्युजिल्याण्डका टम लतामले शृङखलामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि १५ स्थान सुधार गर्दै २३औं स्थानमा पुगेका छन् ।
यता बलिङतर्फ पाकिस्तानका बलर हसन अली शीर्ष स्थानमा छन् । न्युजिल्याण्डबिरुद्धको शृङखलामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ६ विकेट लिएका जरपि्रत बुम्राह करिअरकै सबैभन्दा माथि तेस्रो स्थानमा पुगे ।
न्युजिल्याण्डलाई २-१ ले हराए पनि भारत एकदिवशीय र्‍याङकिङमा दक्षिण अफि्रकालाई पछि पार्दै शीर््ष स्थानमा उक्लन सकेन । एकदिशवीय र्‍याङकिङमा दक्षिण अफि्रकाको १२१ अंक छ भने भारत २ अंकले पछाडि छ ।
10/30/2017 03:43:00 PM खेलकुद
खेल क्षेत्रलाई पत्रकारितामार्फत अगाडि बढाउने उदेश्यले सुर्खेतमा खेलकुद पत्रकार मञ्च गठन गरिएको छ ।
अधिकारी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पत्रकारकारिता विषयका उपप्राध्यापक समेत हुन् ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेका पत्रकारहरुको भेलाले भानुभक्त अधिकारीको अध्यक्षतामा खेलकुद पत्रकार मञ्च गठन गरेको हो ।
मञ्चको उपाध्यक्षमा लक्ष्मी भण्डारी, सचिवमा राजेन्द्र शाही, सहसचिवमा सुर्वण शाही र कोषाध्यक्षमा सृजना बुढाथोकी रहेका छन् ।
यस्तै सदस्यहरुमा निर्मल प्याकुरेल, तिलक पौडेल, निरक कँडेल र लक्ष्यबहादुर सुनार रहेका छन् ।
मञ्च गठन गर्न भएको भेलामा खेलकुद पत्रकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य कमल खत्री, पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवाल, पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारती लगायतले सुर्खेतको पत्रकारिताले समग्र ६ नं. प्रदेशकै खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि कलम चलाउँनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
10/30/2017 03:36:00 PM समाचार
10/30/2017 03:31:00 PM समाचार
10/30/2017 03:30:00 PM समाचार
10/30/2017 03:29:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
10/30/2017 03:28:00 PM समाचार
10/30/2017 03:27:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
रत्ननगर, चितवन, कात्तिक १३ गते । नक्कली फेसबुक ‘आइडी’ बनाई महिलालाई अश्लील कार्य गर्न खोज्ने एक युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
महिलालाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले फेसबुकमा मोबाइल नम्बर र फोटो राखी अश्लील कार्यका लागि सम्पर्क गर्नुहोला भनेर स्टाटस राख्ने गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव शर्मा आचार्यले आज जानकारी दिनुभयो ।
उनीविरुद्ध नक्कली फेसबुक बनाई महिलालाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले अश्लील कार्यका लागि सम्पर्क गर्नुहोला भनी मोबाइल नं र फोटो हालेको भनी केही दिनअघि नै लिखित उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनलाई केही सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान शुरु भएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । (रासस)
10/30/2017 03:26:00 PM समाचार
काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । झापा क्षेत्र नं ३ मा उम्मेदवारी दिने विषयमा नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच केही असन्तुष्ट देखिएको छ । झापा क्षेत्र नं ३ बाट राप्रपाले महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनलाई उठाउने पक्कापक्की भएपछि काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत उक्त स्थानमा आफू उठ्ने अनौपचारिक रुपमा घोषणा गरेसँगै दुई पार्टीमा केही असमझदारी बढेको छ । काँग्रेसले केही साता अगाडि सिटौलाको नामलाई समानुपातिकको अग्रस्थानमा राखेको भए पनि पछिल्लोपटक उहाँको नाम समानुपातिकबाट हटाएपछि राप्रपा बढी सशंकित भएको हो । नेपाली काँगे्रसका अग्रज नेता तीर्थराम डंगोलले झापा क्षेत्र नं ३ का पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताले पूर्व महामन्त्री सिटौलालाई त्यस क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाउन दबाब आएपछि उहाँलाई उम्मेदवार बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । सो क्षेत्रमा काँग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार उठाएपछि त्यसको सट्टामा अर्को स्थानमा राप्रपालाई सघाउने नीति काँग्रेसको छ । अहिले मुलुकमा चुनावको वातावरण बनाएर विकास, समृद्धि कायम गर्न लोकतान्त्रिक गठबन्धनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै उहाँले सो विषयलाई लिएर राप्रपाले गठबन्धनलाई असर पर्ने गरी निर्णय गर्न नहुने बताउनुभयो । गठबन्धनले राप्रपालाई प्रतिनिधिसभामा सात सिट दिने समझदारी गरेपछि पार्टीको झापा क्षेत्र नं ३ मा अत्याधिक सम्भावना देखिएकाले महामन्त्री लिङदेनलाई त्यहाँबाट उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको पार्टीका प्रवक्ता भुवन पाठकले जानकारी दिनुभयो । राप्रपाले झापा क्षेत्र नं ३ अतिरिक्त मकवानपुर १, दैलेख १, पर्सा १, काठमाडौँ ७ मा उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेको छ । बाँके र धनुषा दुई स्थानमा समझदारी हुनका लागि छलफल भइरहेको थियो । राप्रपाले सोही विषयलाई लिएर थप निर्णय लिन आज ३ बजे केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका वाम गठबन्धन तथा चुनावपछिको एकता कायम गर्ने सहमति भएपछि निर्माण भएको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा समेत चुनावमा सिट संख्यामा बाँडफाँड भएको हो ।
10/29/2017 05:54:00 PM खेलकुद
काठमाडौँ, कात्तिक १२ गते । एएफसी १९ वर्षमुनि (यु–१९) च्याम्पियनसिप–२०१८ छनोटमा सहभागी हुन नेपाली युवा फुटबल टोली आज कीर्गिस्तान प्रस्थान गरेको छ ।
यही कात्तिक १४ गतेदेखि सञ्चालन हुने उक्त छनोट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने नेपाली टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट, अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठलगायतले सफलताको शुभकामना दिँदै आज बिदाइ गरिएको हो ।
त्यसैगरी, नेपालले आप्mनो दोस्रो खेल कात्तिक १६ गते बहराइनसँग, तेस्रो खेल कात्तिक १८ गते युएइसँग र चौथो तथा छनोट चरणको अन्तिम खेल कात्तिक २२ गते ओमानसँग खेल्नेछ ।
10/29/2017 05:42:00 PM समाचार
10/29/2017 05:12:00 PM आर्थिक
10/29/2017 05:07:00 PM खेलकुद
10/29/2017 05:03:00 PM समाचार
10/29/2017 05:01:00 PM समाचार
10/29/2017 04:59:00 PM समाचार
चितवन, कात्तिक १२ गते । यात्रुवाहक बस र टिप्पर आज बिहान ९ः१५ बजे ठोकिँदा २६ जना घाइते भएका छन् ।
नारायणगढबाट गोरखा जाँदै गरेको ना ५ ख ८६९४ नंको बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बा ३ ख ९०१२ नंको टिप्पर भरतपुर महानगरपालिका–१ रामनगर जंगलमा ठोकिएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव शर्मा आचार्यका अनुसार घाइतेको चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुर अस्पताल र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनीहरुमध्ये सात जना गम्भीर घाइते छन् । घाइतेमा बसका चालक र यात्रु छन् । टिप्पर चालक फरार रहेको र उनको खोजी भइरहेको शर्माले बताउनुभयो । (रासस)
10/29/2017 04:58:00 PM समाचार , स्वास्थ्य
10/28/2017 03:16:00 PM स्वास्थ्य
10/28/2017 03:12:00 PM समाचार
10/28/2017 03:10:00 PM समाचार
10/27/2017 06:30:00 PM समाचार
10/27/2017 06:28:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
काठमाडौँ, कात्तिक १० गते । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धन लोकतन्त्र र काँग्रेसका विरुद्ध भएको बताउनुभएको छ । नेपाल तरुण दलको ६४ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले लोकतन्त्रमाथि आइपरेको चुनौतीको सामना गर्न सम्पूर्ण तरुण एकताबद्ध भई काँग्रेसलाई विजयी गराउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एक मात्र पार्टी काँग्रेस भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि काँग्रेस बलियो हुनैपर्छ ।” उहाँले पार्टीलाई विजयी गराउन आजैदेखि वडास्तर पुगेर काम गर्न तरुण युवालाई निर्देशन दिनुभयो । कार्यक्रममा काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीका पक्षमा निर्वाचन परिणाम ल्याउनका लागि युवालाई खट्न निर्देशन दिनुभयो । कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनले लोकतन्त्रमाथि चुनौती थपिएको छ भन्दै नेता पौडेलले अधिनायकवादी शासन स्थापना गर्नेविरुद्ध सम्पूर्ण तरुण एक भएर सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पार्टीका महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले काँग्रेसविरुद्धको गठबन्धनबाट झस्किनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा काँग्रेस नेता एवं तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष बालकृष्ण खाँड, तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत र कोषाध्यक्ष विद्वान् गुरुङले काँग्रेसविरुद्ध देखिएको चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिई निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतले विजयी गराउन सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने जोड दिनुभयो । विसं २०१० कात्तिक १० गते काँग्रेसका तत्कालीन सभापति बिपी कोइरालाको समन्वय र निर्देशनमा स्थापित तरुण दलका संस्थापक अध्यक्षमा सिंहध्वज खड्का हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपीले तरुण दलको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गरिरहेका बेला तत्कालीन राजा महेन्द्रले सेनाको बलमा सबैलाई थुनेर ‘कु’ गरेका थिए । राजाले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएका अवस्थामा तरुण दल पनि विघटन हुन पुगेको थियो । विसं २०५४ मा नेपालगञ्जमा भएको काँग्रेसको महासमिति भेलामा काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खाँडको नेतृत्वमा तरुण दल पुनःस्थापनाको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसयता तरुण दलमा महादेव गुरुङ, विनोद कायस्थ, महेन्द्र यादव र उदयशम्शेर राणा अध्यक्ष भइसक्नुभएको छ ।
किन हुन्छ रक्तअल्पता ? कसरी जोगिने
10/27/2017 05:50:00 PM स्वास्थ्य
शरीरमा भिटामिन बी १२, फोलिक एसिड तथा आइरनले रगतको निर्माण गर्दछ । यी तत्व खानाबाट पाइन्छ । खानपान सही नहुदाँ रगत कम हने गर्छ । नेपालमा जनसंख्यामा रक्तअल्पताको समस्या देखिनु भनेको खानपान सही नहुनु हो ।
10/27/2017 05:46:00 PM खेलकुद
आइसीसी ट्वान्टी ट्वान्टी महिला विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत एशियाली क्षेत्रको छनोटका लागि रुविना क्षेत्रीको कप्तानीमा २२ सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ ।
वर्षभर भएका प्रतियोगितामा प्रदर्शनका आधारमा छनोट गरिएका ४४ जना खेलाडी मध्येबाट २२ खेलाडी छनोट गरिएको हो । गत मंगलबारदेखि ३ दिनसम्म टियू मैदानमा छनोट प्रतियोगिता भएको थियो ।
आइसीसी प्रतिनिधि अमिनुल इस्लाम, नेपाली क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा, महिला टोलीका प्रशिक्षक सामसन थापा र कप्तान रुविना क्षेत्री सम्मिलित टोलीले टिम छनोट गरेको हो ।
नेपाली टोलीका सदस्यहरुमा कप्तान रुविना क्षेत्री, उपकप्तान सीता रानामगर, ज्योति पाण्डे, सरिता मगर, नेरी थापा, रोमा थापा, इन्दु बर्मा, करुणा भण्डारी, सोनु खड्का, शोभा आले, नितू भण्डारी, एलिश क्षेत्री, कविता कुँवर, बिजु बुढामगर, सरस्वती चौधरी, लक्ष्मी चौधरी, रितु कनोजिया, संगीता राई, अञ्जली चन्द, काजोल श्रेष्ठ, रेखा रावल र सवनम राई छन् ।
आइसीसी महिला टी-ट्वान्टी विश्वकप छनोट थाइल्याण्डमा हुनेछ ।
बिर्तामोड तनावग्रस्त, प्रहरीको गोलीबाट एकको मृत्यु
10/27/2017 05:41:00 PM पूर्वाञ्चल खबर
झापा, कात्तिक १० गते । कर्फ्यु उल्लंघन गर्दै प्रदर्शनकारी आगजनी र तोडफोडमा उत्रिएपछि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर बिर्तामोडमा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
लक्ष्मण शिवाकोटीको मृत्युबारे छानविनको माग गर्दै शुक्रबार बिर्तामोडमा विहानैबाट प्रदर्शन सुरु भएको थियो । स्थानीय नियन्त्रण बाहिर जान लागेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगायो ।
तर, कर्फ्यु उल्लंघन गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुले प्रहरी चौकीमा तोडफोड तथा अगजनी गरेको प्रहरीले बताएको छ ।
स्थानीय अनियन्त्रित भएपछि बाध्य भएर गोली चलाउनु परेको विर्तामोडका डीएसपीले बताए । प्रहरीले चलाएको गोली लागेर अर्जुनधारा नगरपालिका ११ का नरेश थापाको मृत्यु भएको छ । केही घाइते भएका छन् ।
प्रदर्शनकारीले आक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरीका एसपी समेत घाइते भएका छन् । ‘प्रहरी चौकीमा आगो लागेको छ । केही सवारी साधन पनि जलाएका छन् । कर्फ्यु लगाउँदा पनि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि बाध्य भएर गोली चलाइएको हो’ विर्तामोडका डीएसपी राजकुमार सिलवालले अनलाइनखबरसँग भने ।-अनलाइनखबर
10/27/2017 05:39:00 PM समाचार
10/27/2017 05:35:00 PM विश्व
वासिङटन, कात्तिक १० गते । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएको बताउदै जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुभएको छ ।
बिहीबार गरिएको यो घोषणासँगै जनस्वास्थ्यको समस्या अब बढ्न रोकिने उहाँले विश्वास गर्नुभएको छ ।
दुखाई कम गर्ने सम्वन्धी नशालु औषधि २० लाखभन्दा बढी अमेरिकी नागरिकले प्रयोग गरिरहेको र त्यो क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको राष्ट्रपति ट्रम्पले बताउनुभएको छ ।
“अमेरिकामा अहिले गोली लागेर र सवारी दुर्घटनामा परेरभन्दा नशालु औषधि प्रयोग गरेर मृत्यु हुनेको संख्या धेरै भएको छ, यस्तो औषधिको प्रयोग सबैभन्दा धेरै अमेरिका मै हुनेगरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँकी पत्नी प्रथम महिलासमेत सहभागी भएको ह्वाइट हाउसमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले थप्नुभयो, “यो समस्याबाट प्रभावित नभएको कुनै क्षेत्र, कुनै समुदाय नै बाँकी छैन ।”
उहाँले यही अवस्थालाई कायम राखिरहन नसक्ने बताउदै नशा नलाग्ने औषधिको उत्पादनतर्फ ध्यान दिनु पर्नेमा जोडदिनुभयो ।
उहाँले संकटकाल घोषणाकाले अव अमेरिकामा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सहयोगी रकमहरु बढाइनेछ ।
कार्यबाहक स्वास्थ्य मन्त्रीलाई देशभर जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विषेश व्यवस्था गर्न पनि ट्रम्पले निर्देशन दिनुभएको अधिकारीले बताएका छन् ।
10/27/2017 05:33:00 PM समाचार
10/27/2017 05:28:00 PM समाचार
10/27/2017 05:27:00 PM समाचार
10/27/2017 05:22:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
10/27/2017 05:21:00 PM समाचार
10/24/2017 12:11:00 PM समाचार
सुपारी सेवन गर्नुहुन्छ ? यस्तो समस्या हुनसक्छ
10/24/2017 12:10:00 PM स्वास्थ्य
खाना खाइसकेपछि धेरैको बानी हुन्छ, सुपारी चपाउने । खाना खानासाथ सुपारीको टुक्रा चपाउने तलतल लाग्छ । कतिले ठान्छन्, ‘सुपारीले खाना पचाउँछ ।’
तर, यो भ्रम हो । किनभने यसले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने होइन, बरु हानी पुर्‍याउँछ । द इन्टरनेशनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सरले सुपारीलाई क्यान्सर गराउने मुख्य तत्वको रुपमा पुष्टि गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत सुपारीलाई कार्सिनेजेनिक वर्गमा समावेश गरेको छ ।
यसले शरीरमा लत लगाउनुका साथै सुपारीको बानी पार्छ, जुन छोड्न समेत गार्‍हो हुन्छ । त्यसैले चिकित्सकहरु जो कसैलाई सुपारी नखाने सल्लाह दिने गर्छन् ।-
10/24/2017 12:04:00 PM आर्थिक
काठमाडौं, कात्तिक ७ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले ८.५ प्रतिशत ब्याज दरको नागरिक बचतपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले पाँचवर्षीय अवधिको बचतपत्र यही कात्तिक १२ गतेदेखि निष्काशन गर्न लागेको हो ।
आगामी मंसिर १ गतेसम्म बचतपत्र खरिदका लागि आवेदन दिन पाइने बैंकले उल्लेख गरेको छ । बैंकले ब्याज भने प्रत्येक छ महिनामा र सावाँ २०७९ साल मंसिर ६ गते भुक्तानी गर्नेछ ।
बचतपत्र खरिद गर्न चाहने नेपालीले कम्तीमा रु १० हजार बराबरको आवेदन दिनुपर्छ । बैंकले रु दुई अर्बको बचतपत्र निष्काशन गर्न लागेको हो ।-अनलाइनखबर
10/24/2017 11:57:00 AM विचार